IYunivesithi eBuralo Photo Tour
01 ngo 21
IYunivesithi eBuffalo (SUNY). UMichael MacDonald
IYunivesithi yaseBuffalo iyinyuvesi ephakamileyo yophando, e-Buffalo, eNew York. UB UB ilungu elikhulu kunazo zonke kwinkqubo ye-SUNY, kunye neenkampu ezintathu kunye nabafundi abayi-30 000 abafundele i-grade-class and graduate students. Uninzi lwezakhiwo kule tyelelo lesithombe lufumaneka kwi-UB yaseMzantsi South Campus, ehlala kwindawo yokuhlala yaseNyakatho yeBuffalo. ICampus yaseMzantsi Afrika ikhaya ezikolweni zeeNkonzo zezeMpilo kunye nezeMpilo, iNyango, iMicrotheli kunye neSayensi yezoLimo, iiMicrotherapy, kunye neMicrosoft.
02 ka 21
IHoyes Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
IHoyes Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
I-Edmund B. Hayes Hall yakhiwa ngowe-1874, eyenza ibe yindlu enkulu kunazo zonke kwi-campus. Indawo ephawulekayo yomlando yakhiwa ukuba ibe yinxalenye ye-Erie County Almshouse kunye neFama eliPhezulu, kwaye ibambe iiofisi zolawulo ze-UB xa iyunivesiti yathenga okokuqala isakhiwo. Ngomnyaka we-1909, i-UB yakha i-clock tower clock. IHoyes Hall ilungiselelwe ukubuyiswa ngokubanzi, kwaye ngoku iphethe iSikole soPhuhliso kunye noCwangciso.
Crosby Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
Crosby Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
ICrosby Hall yenye yezakhiwo ezilungileyo kakhulu zeBB, kwaye nangona okokuqala kwakhiwe iSikolo soLawulo, ngoku sisetyenziswe yiSikolo soBuchule noCwangciso. Isakhiwo saseGeorgia Revival Style sineendawo zokufundela amagumbi okufundela, amagumbi okucoca, kunye ne-studio space. Kwindawo yoyilo lweCrosby Hall, abafundi banokuthatha izicwangciso zabo kunye nokucwangcisa, ukwakha, nokuvavanya izakhiwo zabo.
Abbott Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
Abbott Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
UAbbott Hall ngumzi weBrit's Science Sciences Library, eyasungulwa ngowe-1846 ukuba ibe yintlupheko yabantwana bezonyango kwi-campus. Ilayibrari isetyenziswe ngabafundi kwiMicrotherapy yamazinyo, iNyango, iMpilo kaRhulumente kunye neMpilo yeZempilo, iiMicrosoft kunye ne-Biomedical Sciences, kunye neeprogram ze-Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. U-Abbott Hall unikezela ukufikelela kwiphando lweklinikhi kunye nokufundiswa, kwaye iilayibrari zezifundo zifumaneka kwithala leencwadi ukubanceda abafundi bafumane ulwazi abanalo.
05 ka 21
Isakhiwo soPhando lwezoBomi kwiYunivesithi eBuffalo
Isakhiwo soPhando lwezoBomi kwiYunivesithi eBuffalo. UMichael MacDonald
Yintoni abafundi abayifunayo kwiZakhiwo zoLwazi lweeBoomedical, bangafaka isicelo kwiZakhiwo zoPhando lweBiomedical Building. ISikole seMicrothelo kunye neSayensi yezoBomi sisetyenziselwa isakhiwo sokwenza uphando nophando lweeofisi. Isakhiwo soPhando lweBiomedical sigcwele iilebhu kunye nezinye izithuba zokufundisa. Kananjalo ineendawo ezizodwa, ezibandakanya i-Medical Instrument Shop, ezinika izixhobo kunye neteknoloji kubaphenyi abafundi nabaqeqeshi kwi-UB.
Ukwakhiwa kwezeMfundo ze-Biomedical kwiYunivesithi eBuffalo
Ukwakhiwa kwezeMfundo ze-Biomedical kwiYunivesithi eBuffalo. UMichael MacDonald
Isakhiwo seMfundo se-Biomedical sincedisa abafundi be-UB ukuba bafumane imfundo ephezulu yokunyusa ukususela ngo-1986. Ibonelela ngamagumbi okufundela kunye nezinye iindawo zokufundisa zabafundi bezonyango kumaSebe. Isakhiwo sineenkalo ezikhethekileyo kwinkqubo zonyango, kubandakanywa nendawo yeLippshutz yeenkomfa kunye neengxoxo kunye neBeki yokuLawulwa kweBehling, apho abafundi abavela kwiinkqubo ezahlukeneyo zempilo banokusebenzisana kunye nendawo yokukhathalela impilo.
UCary Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
UCary Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
UDkt. Charles Cary Hall uyisakhiwo sezemfundo kunye nenxalenye yeCary-Farber-Sherman Complex. Iphethe iSebe leZayensi zeBlokechnique kunye neZliniki zeZebhedlele, nakuba kwakhiwa ekuqaleni ngo-1950 njengeZakhiwo zeZempilo zezeMpilo. ICary Hall isetyenziswe ngamasebe amaninzi esikolweni, kwaye iqulethe iCandelo loPhando lwezoTyhutha. Isakhiwo sisekhaya kwiSebe leengxaki zokuXhumana kunye neSayensi kunye neZiko lokuLawula nokuLahla.
08 ka 21
I-Alumni Arena kwiYunivesithi yaseBuffalo
I-Alumni Arena kwiYunivesithi yaseBuffalo. Chad Cooper / Flickr
I-Buffalo Bulls incintisana kwiCandelo le-NCAA I- Confed Mid-American Conference . Ibhola leyunivesithi, i-baseball, i-basketball, i-cross country, ibhola lebhola, ibhola lokubhukuda kunye ne-diving, i-tennis, i-track & field, kunye ne-sport). , ithenti, umkhondo kunye nensimu, ne-volleyball). Ukhethiweyo apha yi-Alumni Arena, ikhaya leqela leBB basketball, iqela lokulwa kunye neqela le-volleyball. Isiko sinokuzihlalisa ababukeli abayi-6 100. I-Arena yinxalenye ye-Recreation and Athletics Complex kwiYunivesithi yaseNyakatho yeNyuvesi.
Thelekisa iZikolo zeNkomfa zaseMid-American:
I-SAT Score Ukuthelekiswa kwenkomfa yaseMid-American
Amanqaku omsebenzi Ukuthelekiswa kwenkomfa yaseMid-American
I-Clark Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
I-Clark Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
Xa kwakhiwa uClk Hall, kwakubizwa ngokuba ngu-Irwin B. Clark Memorial Gymnasium. Iquka izixhobo zokuzonwabisa kunye nezemidlalo, kunye neendawo zemidlalo yangaphakathi. I-Clark Hall inikeza ukusetyenziswa kwe-gymnasium enkulu, i-studio yomdaniso, igumbi lesigxina, iinkundla zesikhwama se-handball, amagumbi okudibanisa ngamadoda nabasetyhini, kunye nedama. Kwakhona kuneendawo zokwenza ibhokisi, i-volleyball, i-badminton, ne-squash. I-website ye-UB inexesha lokuzonwabisa, elibandakanya imisebenzi efana nokudada, i-yoga, kunye neeklasi zokusebenza.
UHarriman Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
UHarriman Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
IHarriman Hall yakhiwa ngo-1933-34 ukubonelela indawo yokufunda imisebenzi. Namhlanje, kunika indawo yokuzonwabisa kunye nesibonelelo sokutya kunye namaziko amaninzi kwiindawo zokufunda. Iofisi yeeNkonzo zokuPaka kunye nezoThutho, iZiko lezeMpilo, iZiko loLwazi lwezeMpilo, iZiko loLwazi lwezeMfundo, kunye neVP zeSayensi zeMpilo zonke ziyafumaneka kwiHarriman Hall. Itholakala ngaphaya kweHarriman Quad.
IHolo likaDiefendorf kwiYunivesithi eBuffalo
IHolo likaDiefendorf kwiYunivesithi eBuffalo. UMichael MacDonald
IHolo leDiefendorf likufuphi kwinqanaba lekampus, kwaye iqulethe amagumbi okufundela kunye neeholo ezinkulu zeentetho. Iindidi ezininzi zeeklasi zifundiswa kwiiholo zokufundisa ezingekho phantsi kwamanye amazwe. Isakhiwo sinendawo yeziganeko kunye neendibano zocweyo kunye neendawo zokufundisa. Ingxenye yeHolo yeDiefendorf ngoku isetyenziswe yiNkcazo yokuThuthukiswa kweNkunkuma kunye neSikole sabantwana kunye neentsapho.
Foster Hall kwiYunivesithi eBuffalo
Foster Hall kwiYunivesithi eBuffalo. UMichael MacDonald
I-Orin Elliot Foster Hall yenye yezakhiwo zembali zeBB, kwaye yayisiyindlu yokuqala eyakhiwa yiyunivesithi kwiSouth Campus. I-Foster Hall yagqitywa ngowe-1921 kwaye yahlanjululwa ngo-1983, kwaye iqulethe amagumbi okufundela iSikole seMithi yamayeza. Abafundi kumasebe e-Oral Biology, i-Periodontics kunye ne-Endodontics, i-Oral Diagnostic Sciences, kunye nezinye iiprogram zeeNyango zeZonyango zingasebenzisa indawo yophando eFoster Hall.
UHarriman Quad kwiYunivesithi eBuffalo
UHarriman Quad kwiYunivesithi eBuffalo. UMichael MacDonald
I-Harriman Quad esandul 'ukubuyiswa ibuyele kwiindawo eziluhlaza kunye ne-eco-friendly ukuze abafundi bajonge. Imithi emitsha, izihlahla, kunye nezidalwa zokuhlala ezizalwayo zongezwa, kunye nezitiya zeemvula ezintlanu kunye ne-porous asphalt pavement. I-quad inikeza abafundi malunga neehektare ezimbini zomhlaba zokuphumula, ukuxhamla kunye nokuchitha ixesha ngaphandle. Iindawo zokuhlala kunye nenxalenye ephambili yenza uHarriman Quad ibe yindawo efanelekileyo kwimibutho yentlalo.
IHollywood Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
IHollywood Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
IHollywood Hall isanda kulungiswa, kwaye ngoku iphethe iSikole se-Pharmacy kunye nezoMachiza. Isakhiwo sinamaholo eengcali, amagumbi okufundela, iilabhu, kunye neCandelo loLondolozo lweMveliso kunye neCandelo loLwazi, apho abafundi banokufumana amava kwizakhono ze-pharmacy. IHawai Hall nayo enye yezakhiwo eziluhlaza kunazo zonke kwi-campus, ngexabiso le-Silver LEED kunye noyilo oluvumela i-75 ekhulwini yesakhiwo ukufumana ilanga lendalo.
I-Beck Hall kwiYunivesithi eBuffalo
I-Beck Hall kwiYunivesithi eBuffalo. UMichael MacDonald
Iofisi yeeNkokeli zeSikolo soLondolozo, kunye nezinye iofisi zolawulo, ziseBekk Hall. Isakhiwo esincinci sakhiwa ngowe-1931 ukuya kwindlu yesitoreji. Ubuhlengikazi ngenye yeenkunzi ezidumileyo zeBB, kwaye iinkqubo zayo zivame ukuqondwa. Iindaba ze-US kunye neeNgxelo zehlabathi ziphawule inkqubo ye-Nurse Anesthesia njengenombolo ye-17 kweli lizwe, kwaye iSikole soMhlengikazi esikolweni esiphakamileyo sisikhundla esiphezulu kwiSUNY System.
I-Kimball Tower kwiYunivesithi eBuffalo
I-Kimball Tower kwiYunivesithi eBuffalo. UMichael MacDonald
Eyakhelwe ngo-1957, iKimball Tower yayiyindlu yezindlu zokuhlala kunye nekhaya leSikolo soLondolozi iminyaka emininzi. Ukulandela ukunyuka kwabahlengikazi kwiHolo laseWende, i-Kimball yayilungiswa ngokubanzi ukuya kwindlu yonke kodwa iinkqubo zeklinikhi zeSikolo soLuntu lwezeMpilo kunye nezeMpilo. Amasebe ahlanganisiweyo ahlaziywe ngaphambili ahlakazeka phakathi kwezakhiwo ezisixhenxe, okwandisa intsebenziswano phakathi kwesikhundla. Isabelo seHolo leKimball lizinikele kwiiofisi zoPhuhliso lweYunivesithi.
I-Squire Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
I-Squire Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
Ekuqaleni eyakhiwe ukuba ibe yindawo yezifundo, i-Squire Hall yafumana ukulungiswa okukhulu ukwenzela ukuxhasa iSikole seMithi yamayeza. I-Squire Hall iqukethe amagumbi okufundela, ii-laboratories kunye namaziko e-faculty. Isakhiwo sineehlalo ezingama-400 zamazinyo abafundi abazisebenzisayo kunye nokuziqhuba. ISikole seMicrotherapy yamazinyo sinamakhlinikhi aphezulu, kuquka neeklinikhi eziqhelekileyo zonyango ezivulelekileyo kuluntu. I-Squire Hall iqulethe iqoqo lempahla yamandulo yamayeza kunye nezixhobo zamathambo.
IHolo yeGoodyear kwiYunivesithi yaseBuffalo
IHolo yeGoodyear kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
Uninzi lwabafundi bonyaka wokuqala be-UB bahlala kwiHolo leGoodyear, iholo elihlala phezulu elikufutshane neClement Hall. Abafundi kwiHolo leGoodyear banokuhlala kwii-suites ezimbini, ezi zimbini izibini eziphindiweyo ezixhunyiwe ngendawo yokuhlambela. Kukho ama-suites ambalwa atholakalayo. Isakhiwo sineendawo zokuzonwabisa, izakhiwo zokuhlamba iimpahla, kunye nekhitshi kuwo wonke umgangatho, kunye neendawo zokuzonwabisa. Umgangatho weshumi ubizwa ngokuba yi "X Lounge," apho abafundi bangasebenzisa imidlalo kunye ne-HD kunye ne-TV ebonakalayo.
IHolo leSchoellkopf kwiYunivesithi yaseBuffalo
IHolo leSchoellkopf kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
IHolo yeSchoellkopf iyindlu ehlala kuyo kufuphi neKimball Tower. Enye yeiborori zokuqala kwi-campus, iHolo yeSchoellhopf kunye nezakhiwo zayo ezi-3 zihambelana ne-UB eguqukela ekubeni yunivesithi yokuhlala. IHolo leSchoellkopf, kunye neHolo lePritchard, uMichael Hall, kunye ne-MacDonald Hall, bakha izakhiwo ezihambelana nabafundi basekhaya, babambe i-Pharmacy campus, kwaye bakhonze njengekomkhulu leenkonzo zeeNkonzo zezeMpilo kunye neNkonzo zoLuleko.
Iziko loPhando lweeBuffalo kwi-UB
Iziko loPhando lweeBuffalo kwi-UB. UMichael MacDonald
Phakathi kowe-1960 no-1994, i-Buffalo Equipment Research Centre yaqhuba i-reactor enyukliya eyayisetyenziselwa uphando lwezokwelapha. Nangona kunjalo, ekubeni i-reactor ayichange isetyenziswe iminyaka engaphezu kwemashumi amabini, i-campus iye yanquma ukudiliza isakhiwo. Iziko loPhando lweeBuffalo okwangoku zingenanto kwaye kwisigaba sokugqibela sokucima. Emva kokubhujiswa kwesakhiwo, UB uceba ukujika indawo ibe yintsimi eluhlaza. Amaziko amaninzi e-UB aphakamileyo aphumelele ukufumana ubulungu besikolo kwi-Association of American Universities.
I-Townsend Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo
I-Townsend Hall kwiYunivesithi yaseBuffalo. UMichael MacDonald
Nangona i-Townsend Hall okwamanje ingasetyenziswanga kwaye ingenamntu, ihlala iyimfuneko ebalulekileyo kwimbali ye-UB. Kanye njengeHoyes Hall, i-Townsend yayiyinxalenye yecandelo le-Erie County Almshouse kunye neFama elibi. Kamva ibambe iSebe leZayensi zeBioloji, ekugqibeleni lathuthela kwiNyuvesi yaseNyakatho yeNyuvesi. Ukuze ufunde okungakumbi ngembali yaseNktsend Hall yenkcazo, unokujonga iwebsite ye-archive yewebsite.
Funda ngezinye iiklasi ze-SUNY:
Albany | Binghamton | Brockport | State Buffalo | Cortland | Fredonia | Geneseo | Entsha Paltz | Old Westbury | Oneonta | Oswego | Plattsburgh | Potsdam | Ukuthenga | Stony Brook
INkomfa ye-Sun Belt
IYunivesithi yaseStford eNyukodini yeZiko loBomi beZikolo
IYunivesithi yaseCalifornia Los Angeles Photo Tour
Izizathu ezifanelekileyo zokudluliselwa kwiKholeji entsha
Univeristy yaseCentral Florida Photo Tour
Iikholeji zeSixeko eziMkhulu neeYunivesithi ze-Beyond Harvard ne-NYU
Ifoto yeTyunivesithi yaseConell
I-Tourist Photo Tour yaseSan Diego State
Ikholeji entsha yeFlorida Photo Tour
Umsebenzi we LeftStr
Ngaba ukuQeqesha ngeZakhiwo kunye nokuThuthukisa izisindo zokuThuthukiswa koPhuhliso?
Billiards Practice - Ezinye zeeNkqubo eziMnandi kakhulu
Inkohlakalo yobuGcisa kwiBhola ibhola
Lowo Waqala Umsebenzi Olungileyo Kuwe - Filipi 1: 6
Konke Unako Ukufuna Ukwazi Ngezobisi Zezinambuzane
Ukuhlanjululwa kwamakhaya akho
IDester kunye neDessert
Abahlaziyi beFilimu beMidlalo yeTriror
I-Hilariously Knitwear Knitwear Awuyi Kukholelwa Eyona nto ikhoyo
Indlela yokubiza 'CH' ngesiFrentshi
Cambodia | Iinkcukacha kunye neMbali
Yiyiphi Ibhanti yeCateboard yeScottboard kufuneka ndiyithenge?
Ukuthengisa iSigama sabafundi besiNgesi
I-Top 15 Funny Funny Photobombs kwi-intanethi
Ifoto yokuTyelelwa kweProjekthi yamaBhinqa iPraft Foregs
Der Freischütz Isiqwenga
Ingquzulwano ye-Orders Patrician nePlebeian
Uqeqesho kunye neempendulo kwiDiving
I-Top Marvel Comic Book Superheroes
Umthetho wesi-2 - Umdlalo weMidlalo (iMigaqo yeGolf)
Funda ukuba ingaba okanye ayikho iiglovu zisiza iCarpal Tunnel Syndrome